Ruushka oo ceyrinaya diblomaasiyiinta Britain ee Moscow - BBC News Somali
Ruushka oo ceyrinaya diblomaasiyiinta Britain ee Moscow
Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegtay in diblomaasiyiinta ka hawlgala safaaradda Britain ee Moscow dalka laga musaafurin doono muddo toddobaad gudihiis ah.
Tallaabadan ayaa jawaab u ah go'aanka Britain ay dalkeeda uga eriday 23 diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka.
Diblomaasiyiinta Ruushka ayaa lagu amray in ay Britain ka baxaan kaddib murankii diblomaasiyadeed ee ka dhashay weerar lagu qaaday Sergei Skripal oo 66 isla markaana ka tirsanaan jiray mukhaabaraadka Ruushka iyo gabdhiisa Yulia Skripal oo 33 jir ah.
Weerarkaasi ayay Britain ku eedeysay dowladda Ruushka balse xukuumadda Moscow waa ay beenisay eedeymahaasi.
Warbixin qoraal ah oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sidoo kale lagu sheegay in la xirayo hay'adda Britain u qaabilsan dhaqanka iyo in aan la ogolaan doonin in Britain ay qunsuliyad ka furato magaalada St Petersburg.